Samadhan News बजेटमा विभेद गरेको सांसद बिन्दुकुमार थापाको गुनासो – SAMADHAN NEWS
बजेटमा विभेद गरेको सांसद बिन्दुकुमार थापाको गुनासो
लेकसाइडस्थित बगैंचा वेलनेस रिसोर्टमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सांसद बिन्दुकुमार थापा, (बायाँ) कास्की कांग्रेस सभापति कृष्ण केसी लगायत । तस्बिरः समाधान
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य बिन्दुकुमार थापाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतामाथि प्रदेश सरकारले विभेद गरेको गुनासो पोखेका छन् । कास्की क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ मा कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद थापाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले योजना मागेर पनि अन्तिममा कुनै पनि योजना नसमेट्दा आफूसहित जनताको अपमान भएको बताए ।
विचार र आस्थाकै आधारमा प्रदेश सरकारले कास्की क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ का जनतालाई विकासबाट विमुख गर्न लागेको उनको गुनासो छ । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनतामाथि प्रदेश सरकारले ज्यादती गरेको छ । मैले पटक पटक संसदमा पनि उठाइरहेको छु । तर सरकारले सुनेन,’ उनले भने, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश सरकारकोे विकासबाट विमुख भएको छ । संघीय राज्य व्यवस्थापछि घरदैलोमा सिंहदरबार आइपुग्ने अपेक्षा सर्वसाधारणको थियो । तर जनताप्रति गरेको अनुदार व्यवहार सहिनसक्नु भयो ।’ सरकार संघीयताको पक्षमै नभएको उनले आरोप लगाए । बजेट विनियोजनमा सीमित कार्यकर्ताको स्वार्थ पूरा हुने गरी ‘खल्ती मोटो’ बनाएको उनको आरोप छ ।
सरकारले फरक विचार राख्ने मान्छेलाई उपभोक्ता समितिमा नराखेको पनि सांसद थापाको आरोप छ । सत्तारुढ नेकपाबाहेक अरु राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्नेले बजेट देख्नै नहुने मनसाय सरकारले राखेको उनले सुनाए । ‘प्रदेश सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढिरहेको छ । विकास निर्माणका काममा प्रतिपक्षी दलका सांसदसँग कुनै समन्वय हुँदैन । प्रतिपक्षी दलका सांसदले राखेका जायज मागसमेत सरकार सुन्नै चाहँदैन,’ उनले भने, ‘किनभने प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित एउटै पनि कार्यक्रम मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा छैन । सरकाले ल्याएको ३२ अर्ब बजेटमा के मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको हक छैन ? दामासायी ढंगले बाँड्ने हो भने पनि मेरो क्षेत्रमा करिब ९० करोड बजेट चाहिन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले योजना माग्दा आफूले १९ वटा विभिन्न योजना निवेदनसहित दिएको सांसद थापाले बताए । पोखरा चक्रपथ निर्माणदेखि पोखरा बसपार्क व्यवस्थापन, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, बाटो, पुल निर्माण, सहरी क्षेत्र व्यवस्थापनका दूरगामी योजना समेट्न गरेको मागलाई बेवास्ता गर्दै बजेट नदिन षड्यन्त्र गरिएको उनको आरोप छ । ‘बजेट सार्वजनिक गर्दा एउटा सिँचाइसम्बन्धी १० लाखको योजना परेको थियो, पछि रातो किताबमा छापिएर आउँदा त्यो पनि हटाइएछ, चरम विभेद भयो,’ उनले भने ।
आफ्नो क्षेत्र पोखरा महानगर भए पनि ग्रामीण भाग पर्ने हुँदा त्यहाँ विकासको खाँचो रहेको उनले औंल्याए । उनले भने, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा विकटमध्येका वडा पनि छन् । यहाँको विकास चाहनु के मेरो अपराध हो ? विकासका लागि बजेट माग्न नपाउने मैले ? तपाईंहरुलाई नै साक्षी राखेर म के चेतावनी दिन चाहन्छु भने, यसैगरी मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनतामाथि विभेद गरिरहने हो भने यहाँका जनता उठाएर म प्रदेश सरकारको सिहंदरबार घेराउ गर्न आउन नपरोस् ।’
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सार्वजनिक
सांसद बिन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको २ करोडका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा खर्च गर्ने गरी उक्त कार्यक्रम सरकारले ल्याएको थियो । समानुपातिक सांसदको पनि भूमिका रहने हुँदा उनले सबैको चित्त बुझाएर नै २ करोडका कार्यक्रम लागु गर्न लागेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित बजेटमा अधिकांश भवन निर्माणका योजना छन् । सिँचाइ, खानेपानी, बत्ती जडान, बाटो मर्मत तथा विस्तार, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना लगायतका पूर्वाधार विकासका योजना सांसद थापाले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कास्की क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ बाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने उनीसहित ४ जना सांसद छन् । उक्त क्षेत्रमा २ जना कांग्रेस र २ जना नेकपाका सांसद छन् । तर उनले एकलौटी नभई समानुपातिक र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फको बजेट मैले निकै सुझबुझका साथ समानुपातिक ढंगबाट सबैको उपस्थितिमा विनियोजन गरेको छु । यहाँ कसैको विमति छैन,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा धेरै सांसद रहेको क्षेत्रमध्ये म निर्वाचित भएको क्षेत्र पर्छ । सबैको चित्त बुझाउने गरी बजेट बाँडफाँट गरिएको छ । यदि सरकारको रिस पोखेको भए त्यो २ करोड मैले पनि एकलौटी वितरण गर्न सक्थें । तर म विचारको सम्मान गर्छु, राज्यजस्तो अनुदार सोचाइ मसँग छैन ।’
प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको ढाँचा नै नमिलेको तर्क गरे । संघीय सरकारसँग नबाझिने गरी सबै नीति नियम बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै संघको नियमलाई नहेरी कार्यक्रम ल्याउँदा व्यवस्थापन नमिलेको सांसद थापाको भनाइ छ । ‘कुनै क्षेत्रमा २ करोड एउटै सांसदले योजना छान्ने । कतै ४ जनासम्म सांसदहरु हुँदा न्यायोचित वितरण कसरी हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘समान बजेटमा असमान सांसद र असमान भूगोलको व्यवस्थापन मिल्दैन भन्ने सामान्य हेक्का पनि सरकारलाई भएन ।’ आगामी वर्ष उक्त कार्यक्रम न्यायोचित हुने किसिमको बनाउन उनको सुझाव छ ।
सुविधासहितको ९ लाख सामाजिक सेवामा
कांग्रेसबाट कास्की प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १ मात्र सांसद हुन् बिन्दुकुमार थापा । उनले सांसद भइसकेपछि प्राप्त हुने सरकारी सुविधा सबै सामाजिक सेवामा खर्चिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही अनुरुप २०७५ फागुन १ देखि २०७६ पुससम्मको प्राप्त ६ लाख १० हजार ६ सय २९ रुपैयाँसहित ९ लाख ३ हजार ७ सय १ रुपैयाँ सामाजिक सेवामा खर्चिएको सांसद थापाले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । गतवर्ष पनि उनले सुविधासहितको रकम खर्चिएको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । ‘११ महिनाको अवधिमा मैले विकास निर्माण र सामाजिक काममा ९ लाख बढी खर्चिएको छु,’ उनले भने, ‘कुनै अमुक राजनीतिक दलभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा जनताको समस्या समाधान गर्न सहयोग गरेको हुँ ।’ राजनीतिलाई पेसा, व्यवसाय र जागिरको रुपमा लिन नहुने विचारबाट प्रेरित भई सरकारी सेवा सुविधा समाजसेवामा उपयोग गरेको उनले बताए ।
तरुण दलको आर्थिक सहयोग
यातायातको काम लिएर पोखरा धाउनु नपर्ने
पर्यटक आउने आशामा उत्साही छन् पाेखरेली पर्यटन व्यवसायी
सरकारले थामथुम गरेपछि संसद बैठक सञ्चालन गर्न कांग्रेस राजी
निकाे भए कांग्रेस महामन्त्री काेइराला